Tapaka ny antsasaky ny fiaramanidina jet tao Honduras
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tapaka ny antsasaky ny fiaramanidina jet tao Honduras
Fiara fiaramanidina manokana an'ny Gulfstream avy any Austin, Texas, no nianjera tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Toncontin any Tegucigalpa, Honduras, ary tapaka roa.
Farafahakeliny olona 6 no naratra ary nalefa tany amin'ny Hopitaly Escuela. Inoana fa amerikana ireo naratra.
Nidina an-tsambo ny fiaramanidina rehefa avy niantsona ary nianjera tao anaty hantsana kely iray ary nizara roa tamina arabe iray izany.
Ny firaketana ny Federal Aviation Administration dia nampiseho fa voasoratra ho an'ny TVPX Aircraft Solutions Inc. ao avaratr'i Salt Lake, Utah ny sidina.
Ny seranam-piaramanidina Tegucigalpa dia fantatra ho iray amin'ireo fomba sarotra kokoa ho an'ny mpanamory fiaramanidina, satria voahodidin'ny tampon'ny tendrombohitra sy ny manodidina azy io. Any amin'ny 6 km (3.72 miles) avy eo afovoan-tanàna Tegucigalpa no misy azy ary efa ela no noheverina ho iray amin'ireo fidinana sarotra indrindra sy mampidi-doza noho ny ampahany amin'ilay toerana be tendrombohitra tsy mahazatra azy io. Ny runway dia iray amin'ireo fohy indrindra eto an-tany, 6,112 metatra monja ny halavany (LAX dia manakaiky ny 3,000 metatra fanampiny ho an'ny fiaramanidina lehibe).
Ny faritra be tendrombohitra manodidina ny seranam-piaramanidina kely dia manery ny fomba fiasa iray izay mitarika fihodinana haingana sy maranitra alohan'ny filaharana miaraka amin'ny lalambe. Ny fitsokan-drivotra matetika dia vao mainka manasarotra ny raharaha, mitaky fanitsiana haingana ny familiana ny stabilizer, fanitsiana ny fanamafisam-peo ho an'ny stabilizer marindrano ary fanitsiana ny fanidin'ny elatra mba hanodinana ny fiaramanidina amin'ny fomba farany.